ဥရောပအခြေဆိုက် Smart Guard Company ကထုတ်လိုက်တဲ့ မိမိကိုယ်ကို
ဘဝမှာ စမတ်ဖုန်းလိုနည်းပညာတွေက လူတွေအတွက်မရှိမဖြစ် အသုံးပြု
အဓိက ပစ်မှတ်ကတော့ မသမာသူတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မူတွေရန်မှ အားနွဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေကို အကာအကွယ်ပေးစေလိုတဲ့အတွက် မိမိရဲ့  Cell-phone တွေကို Self-defense systems အဖြစ်ပြောင်းလည်း ပေးထား
ကနဦးတီထွင်ဖန်တီးပေးထားမူအရ iPhone တွေမှာသာ တပ်ဆင်အသုံးပြုရ
မှာဖြစ်ပြီး အဆိုပါကရိယာတွေကို အခြားသူတွေလွယ်ကူစွာအသုံးမပြုစေ
ပုံမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ဟာကတော့ ဖုန်းနဲ့တွဲဖွက်ပြီး အသုံးပြုရတဲ့ Pepper Spray
လို့ခေါ်တဲ့ ငရုပ်ကောင်းဆေးဖျန်းရေပါ။လက်ဗွေစနစ်ကိုအသုံး ပြုထားတဲ့အ
တွက် မိမိကိုယ်တိုင်သာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ ရန်သူ
ရဲ့ မျက်စိကို လွယ်ကူစွာဖျန်းထည့်လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
ထို့ပြင် ယခုထက်ပိုမိုပြင်းထန်ပြီး အန္တရာယ်များတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပါ
Yellow Jacket လို့ခေါ်တဲ့ အရာကိုလည်းဖန်တီးပေးထားပါတယ်။အဲဒါက
တော့ အဆိတ်ပြင်းတဲ့ ပျားတစ်ကောင်အတုတ်ခံရ သလိုမျိုး အားအလွန်ပြင်း
တဲ့ တစ်ချက်ထိ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်တွေကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအနံ့ဖြန့်ချိဖို့ပြုလုပ်ထားပြီး Pepper Spray ပါကာဗာအတွက်ကို
တော့ ၃၉.၉၅ ဒေါ်လာနှင့် စွမ်းအားမြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေး
မယ့် Yellow Jacket ကာဗာတစ်ခုကိုတော့ ကန်ဒေါ်လာ ၁၄၀ ကျသင့်မယ်
ခွင့်ပြုချက်မဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့အဆောက်အအုံတွေကို ပြန်ဖျက်ခိုင်းပြီလို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြ
ခွင့်ပြုချက်မဲ့တည်ဆောက်နေတဲ့အဆောက်အအုံတွေကို ပြန်ဖျက်ခိုင်းပြီလို့ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီက ၁၂.၉.၂၀၁၃ ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ အဆောက်အအုံတွေတည်ဆောက်နေတာ အဆောက်အအုံပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်နေတဲ့ မြို့နယ်တွေထဲမှာ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်က အဆောက်အအုံပေါင်း ၅၁၁ လုံးနဲ့ လှိုင်မြို့နယ်၊အင်းစိန်မြို့နယ် နှစ်ခုပေါင်း ၅၀၀ ကျော်လို့သိရပါတယ်။
ပုံမှာမြင်ရတာကတော့သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ ဃ ရပ်ကွက် လွတ်လပ်ရေးလမ်းမှာ ခွင့်ပြုချက်မဲ့ဆောက်ထားလို့ ပြန်ဖျက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတဲ့ အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။
မလေးရှားမှထွတ်ပြေးလာသောမြန်မာအလုပ်သမား ၁၅၀ ခန့်သည် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်မှတဆင့် စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့က မြ၀တီမြို့သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
၄င်းအလုပ်သမားများသည် မလေးရှားမှ ၃ညအိပ် ၄ရက်ခရီးဖြင့်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ကာ ထွတ်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ ဝမ်းချုပ်ခြင်းက သက်သာအောင် ဆေးသောက် စရာမလိုဘဲ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ။၁။နေ့စဉ်စားနေကျ အစားထဲ မှာ လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးတွေ၊အရွက် တွေ ၊ အစေ့အဆန်တွေ ထပ်ပေါင်း ထည့်လိုက်ပါ။ အမျှင်ဓာတ်က ဝမ်း ချုပ်တာကို သိသာစွာ သက်သာစေ ပါတယ်။
၄။မရသေးရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ တချို့တံ ဆိပ်တွေက ဝမ်းချုပ်ခြင်းကို ပိုသက် သာစေပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးကတော့ ယင်းအဆစ်များ အားနည်းခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။ လက်ချိုးတယ်ရယ်လို့မဟုတ်ပဲ ချိုးတဲ့ အဆစ်များအားလုံး ဟာ အကြိမ်ပေါင်း၊ နှစ်ပေါင်းများလာရင် အားနည်းလာပြီး အသက်ကြီး လာရင် လေဖြတ်ဖို့ ပိုအခွင့်အလှမ်းများတယ် လို့ ဆေးပညာရှင်များက ဆိုထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ရွှေဂုံတိုင်နှင့် ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတား စီမံကိန်းနှစ်ခုစလုံးမှာ ရာခိုင်နှုန်း ၈၀ ခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ သတင်းရရှိသည်။
"ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတား စီမံကိန်းက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပြီးနေပြီ။ ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားကလည်း အဲဒီလောက် ပြီးနေပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အပြီးသတ် တည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ပြေလည်စေရန်အတွက် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု အများဆုံး ဖြစ်ပွားသည့် လမ်းဆုံများဖြစ်သော လှည်းတန်း၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ဘုရင့်နောင်နှင့် တာမွေငါးလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်တို့တွင် ခုံးကျော်တံတားများ တည်ဆောက်ရန် စီစဉ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့နောက် လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားကို စတင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီး တာမွေငါးလမ်းဆုံ မီးပွိုင့်မှာမူ ခုံးကျော်တံတား ဆောက်လုပ်ရန် မလိုအပ်ခြင်းကြောင့် မဆောက်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတားအား ယခုနှစ် ဧပြီ ၁၀ ရက်တွင် စတင်အသုံးပြုခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လှည်းတန်းခုံးကျော်တံတား ဆောက်ပြီးသော်လည်း ယင်းအနီးတစ်ဝိုက်သာ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ပြေလည်ပြီး တံတားအဆင်းဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးမှတ်တိုင် အနီးမှ စတင်၍ ယာဉ်များပိတ်ဆို့နေကြောင်း သိရသည်။
ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားအား နိုဝင်ဘာလ တတိယပတ်တွင် အပြီးတည်ဆောက်မည်ဟု တံတားအား တာဝန်ယူ တည်ဆောက်နေသည့် Capital Development Co.Ltd မှ ထုတ်ပြန်ထားပြီး ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတားကိုလည်း ဒီဇင်ဘာလတွင် အပြီးတည်ဆောက် သွားမည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။
ယခုလက်ရှိ ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားတွင် တံတားသံပေါင်များ တပ်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေသောကြောင့် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းဆုံအား ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်းပေါ်မှ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းအား ဇီဝိတဒါန သံဃာ့ဆေးရုံရှေ့ထိ ပိတ်ထားပြီး မီးပွိုင့်ဖြတ်သန်းယာဉ်များမှာ ရှောင်ကွင်းလမ်းများဖြစ်သည့် ရေတာရှည်လမ်း၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်လမ်းများမှ ဖြတ်သန်းသွားလာ နေရသည်။
(ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း မြင်ကွင်းအား စက်တင်ဘာလအတွင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-အောင်မျိုးသန့်))
မီနီဖုန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် ထုတ်လုပ်ရာမှ ဈေးကွက်မှာ ထပ်မံမြင်တွေ့နိုင်ချေ မီနီဖုန်း တစ်လုံးကတော့ Sony Xperia Z1 mini ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Sony Xperia Z1 ကို IFA မှာ ကြေညာပြီးသွားပါပြီ။ ယခုရက်ပိုင်းအတွက် Leak ဖြစ်လာတဲ့ သတင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံ ကတော့ Sony xperia Ze Mini ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မီနီဆိုပေမယ့် ရေးသား ဖော်ပြချက်များအရ အရွယ်ခပ် ငယ်ငယ် ကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ၄.၃ လက်မ အကျယ်ရှိ HD Resolution ပေးနိုင်သော အရည်အသွေးကောင်း မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြု ထားပါမယ်။ RAM က 2GB ပါ။ On board Storage က 8 GB ပါဝင် ပါ တယ်။ ကင်မရာ ကလည်း 20 Megapixel တောင်ပါ။ Snapdragon 800 quad-core processor ကို အသုံးပြုထားကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဒီတော့ မီနီနဲ့ Z1 က အရွယ်အကြီးအသေး လောက်ပဲ ကွာ သယောင်တောင် ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ရေစုံခံမှု ရှိမရှိတော့ ထည့်သွင်း မရေးသား ထားကြ ပါဘူး။ ခန့်မှန်းချက်များကတော့ ၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီလမှာ ကျင်းပမယ့် CES 2014 မှာ Sony Xepria Z1 Mini ကို မိတ်ဆက် ပြသ သွားနိုင်ချေ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ Frankfurt မှာ ကျင်းပလျက် ရှိတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကားပြပွဲမှာ BMW မှ အသစ်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ ကား သစ် ဖြစ်ပါတယ်။
BMW ဟာ i အမည်တပ်ပြီးတော့ လောင်စာဆီစား သက်သာတဲ့ ကားတွေ ထုတ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း BMW ကိုယ်စားလှယ် ရှိပြီမို့ ပုံမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကား ရောက်ရှိဖို့ မျော်လင့် ပါတယ်။ BMW i8 plug in hybrid လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ကားပါ။ လောင်စာဆီအား အင်ဂျင်နဲ့ လျှပ်စစ် မော်တော တွဲမောင်းတဲ့ အားပြန်ဖြည့် (Plug-in) ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင်အရွယ်က ၁.၅ လီတာ ပါ။ ဆလင်ဒါ ၃ လုံးပူး တာဘို နှစ်လုံးတပ် ဗားရှင်းမို့ မြင်းကောင်ရေအား ထုတ်လုပ်မှုက ၂၃၁ တောင် ရှိပါတယ်။ သူ့ချည်း သက်သက်လည်းမောင်းနိုင်ပါတယ်။ ထပ်မံ အားဖြည့်ပေးထား တာကတော့ ၉၆ ကီလိုဝပ်အားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ လျှပ်စစ် မော်တာပါ။ သူကလည်း မြင်းကောင်ရေအား ၁၃၁ သီးသန့် ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီတော့ စုစုပေါင်း မြင်းကောင်ရေအား ထုတ်လုပ်မှုက ၃၆၂ တောင် ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီစားနှုန်းက ၉၄ မိုင်ခရီးအတွက် တစ်ဂါလံတည်းပါ။ အမေရိကန် မှာ ပြုလုပ်တဲ့ စမ်းသပ်ချက် ရလဒ်ဖြစ်ပြီး တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာတော့ ကွဲပြားမှု အနည်းငယ် ရှိနိုင်ပါတယ်။ အပြင်ပန်း ဒီဇိုင်းကော အတွင်းဘက် ဒီဇိုင်းပါ i စီးရီး Concept အတိုင်း အကျအန ပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ concept အဖြစ်ပြသခဲ့တာ ယမန်နှစ်ကပါ။ ယခု ဈေးကွက်ကို တကယ်ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အော်ဒါစနစ်နဲ့ မှာယူနိုင်ပြီး ဈေးနှုန်းက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁သိန်း၎သောင်းအောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင် သိန်း ၁၃၀၀ ကျော် ဖြစ် ပါတယ် သို့ပေမယ့် တကယ်စီးဖို့မှာမယ်ဆို အခွန်ခနဲ့ ပေါင်းလိုက်ရင် သိန်း ၃၀၀၀ အောက်ထစ်ပါပဲ။ ဂျာမနီကားချင်း အတူတူ မာစီဒီး E Class နောက်ဆုံးပေါ် ကန်ဒေါ်လာ ၈ သောင်း တန်တောင် မြန်မာပြည်ဈေးကွက်မှာ သိန်း ၂ ထောင် ဝန်းကျင် ပေါက် လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် i8 က အင်ဂျင်သေးတော့ အခွန်လည်း သက်သာ လောက်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ ဈေးကွက်အတွက်ကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ မှာယူမှု စတင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ။်
GsmArena.com ရဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ စစ်တမ်းများအရ ယမန်နေ့မှမိတ်ဆက်
လိုက်တဲ့ iPhone 5s ဟာ စက်တင်ဘာ-၄ မှာမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy Note3ကိုကျော်လွန်ကာ လူစိတ်ဝင်စားမူအများဆုံး အဖြစ် ထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်။
GsmArena ဟာနိုင်ငံတကာအနံ့ထွက်ပေါ်ခဲ့သမျှဖုန်းတွေရဲ့  Features တွေ၊
ဖြစ်ပြီး ယခုဖော်ပြထားတဲ့ စစ်တမ်းတွေက နေ့စဉ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတွေ
ရဲ့  စစ်တမ်းကိုကောက်ယူထားခြင်းဖြစ်တယ်။
၂၄ နာရီတောင်မပြည့်သေးတဲ့ iPhone 5s ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်နေပြီး
1. Apple iPhone 5s 230,442
2. Samsung Galaxy Note3154,244
3. Apple iPhone 5c 121,011
4. Sony Xperia Z1 66,268
5. Samsung I9500 Galaxy S4 66,083
6. Samsung Galaxy S Duos S7562 53,491
7. Samsung Galaxy Core I8260 48,178
8. Nokia Lumia 520 47,054
မှတ်ချက်။ ။အချိန်အပြောင်းအလည်းအရ ကိန်းဂဏာန်းများထပ်တိုးနေပါ
သည်။စိတ်ဝင်စားသူများ အဆိုပါဝက်ဆိုဒ်သို့ အချိန်ပြည့်ဝင်
နောက် သားမယားအဖြစ် ပေါင်းသင်းရန် ကြံစည်နေသဖြင့် ဘန်ကောက်အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအဖွဲ့ MAT နှင့် ထိုင်းအစိုးရ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ AHTD နှင့်ပူးပေါင်း၍ ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်
သင့် ခြေချောင်းလေးများ လှပသန့်စင် သွားစေမည့် အလွယ်နည်းလမ်းများ
အထူးတလည် ပြုပြင် ပြောင်းလဲဖို့ မလို အပ်ဘဲ သင့်ခြေချောင်း လေးတွေ လှပ သန့်စင် သွားစေမယ့် နည်းလမ်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေး ပါက ခြေထောက် နာကျင်ခြင်း၊ အသား မာတတ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းနဲ့ ခြေ ထောက်အနံ့ဆိုး ထွက်ခြင်းတွေကို သက် သာစေ ပါလိမ့်မယ်။
အသားမာများ ပုံမှန်ဖယ် ရှားပေးပါ
ခြေထောက် အသားမာ တက်တယ် ဆိုတာ အရေပြားက ဆဲလ်သေတွေတ ဖြည်းဖြည်းများလာပြီး အချိန်ကြာကြာ ပွတ်တိုက်သန့်စင်မှုမပြုတာကြောင့် အရေ ပြားပေါ်မှာ မာကျောတဲ့ အသားမာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတာပါ။ ကြေးတွန်းကျောက် ဒါမှမဟုတ် ကြေးတွန်းတဲ့ဘရပ်ရှ် သုံးပြီး ခြေဖဝါးနဲ့ ခြေဖနောင့်တွေကို ပုံမှန်ရေချိုး တိုင်း ပွတ်တိုက်ပေးကာ၊ ရေချိုးပြီးချိန်မှာ အစိုဓာတ်ထိန်း ခရင်မ်တစ်မျိုး ချက်ချင်း လိမ်းထားလိုက်ပါ။
လက်သည်း ခြေသည်း ကျန်းမာစေမည့် အစာစားပါ
သင်ဟာ လက်သည်းခြေသည်း ကျန်းမာရေးကို အထူး ဂရုစိုက်ပြီး သက် သောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် ဖိနပ်မျိုးကို စီးတာတောင် သင့်ခြေသည်း တွေက ပျက် စီးပြီး ခြောက်သွေ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ သင်စားတဲ့အစားအစာထဲမှာ လိုအပ်မှုရှိ နေပါပြီ။ ဗီတာမင်စီ၊ အီး၊ ဘီ-၁၂၊ ဇင့် ဓာတ်တွေ သင့်ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်နေ တာဖြစ်ပြီး၊ ငါး ၊ အသား ၊ ဥ ၊ သင်းရွက် သုပ်၊ အာလူးနဲ့ မုန်လာဥနီတွေပါဝင် အောင်စား ပေးပါ။
ခြေမနေရာက ခြေဆစ်ရိုးဟာ တ ဖြည်းဖြည်းကြီး လာပြီး ကားထွက်လာကာ ခြေချောင်းလေးတွေ ပုံစံပျက်စီးလာတာ မျိုးပါ။ ခြေမဘေးက ခြေဆစ်ရိုးဖုတ ဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာမျိုးပါ။ အမျိုးသ မီးတွေမှာ အမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးတွေ့ ရတတ်ပါတယ်။ ခြေဆစ်ရိုးဖု တဖြည်း ဖြည်းကြီး လာတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ ဖိနပ်ကို သင့်ခြေချောင်းလေးတွေထက်ကျယ်တာ မျိုးရွေးစီးပါ။ ခြေချောင်းထိပ်တွေ ကျပ်မ နေပါစေနဲ့။ ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်မစီးပါနဲ့။ နား လည်တဲ့ဆရာဝန်ကို ပြသတိုင်ပင်ပါ။
ခြေသည်း အရှည်ထားတဲ့သူ မဟုတ် ရင် သင့်ခြေသည်း တွေကို ပုံမှန်လှီးဖြတ် ပေးတာက ခြေစွယ်ငုပ် တာကို သက်သာ စေနိုင်ပါတယ်။ ခြေသည်းရှည်ထားသူတွေ ဆိုရင်လည်း ခြေသည်းထောင့်စွန်းတွေကို ပုံမှန်လှီးဖြတ်ပေးတာမျိုးနဲ့ ကြေးမဝင်အောင် ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ခြေသည်းညှပ်ပါ။ ခြေသည်းထောင့်စွန်း တွေကို ချွန်မနေစေဘဲ ချောမွေ့နေပါစေ။
အရောင်ရင့်ရင့် လက်သည်းဆိုး ဆေးတွေကို အချိန်ကြာကြာအသုံးပြု ခြေသည်းခွံတွေကိုသာ ပြုပြင်ပေးဖို့လိုပါ တယ်။ လက်သည်းဖျက်ဆေးကို ဂွမ်းဖတ် မှာဆွတ်လိုက်ပြီး ခြေသည်းပေါ်မှာ တစ် မိနစ်လောက်ကပ်ထားပြီးမှ ဆေး ကြောလိုက်ကာ တံစဉ်းနဲ့ပွတ်တိုက် ပေးပါ။ ခြေသည်းခြောက်သွေ့ တတ်တာကြောင့် ရေနံဂျယ်လီ ကို ခြေသည်းနဲ့ ခြေချောင်းလေး တွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။လက် သည်းဆိုးတွေကြောင့် လက်သည်း ဝါတာမျိုးဆိုရင် ဖော်ပြပါနည်းလမ်းနဲ့ သုံးကြိမ်ပြုလုပ်ပေးရင် လက်သည်းအ ရောင်ဖြူလာနိုင်ပေမယ့် လက်သည်းပိုး ဝင်လို့ လက်သည်းဝါတာမျိုးဆိုရင်တော့ နားလည်တဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ အကြံကို ယူဖို့ လိုပါတယ်။
ရေဓာတ်ပါဝင်တဲ့ ခရင်မ် တစ်မျိုါ်ကို ခြေထောက် ပွတ်တိုက်ပြီး ချိန်တွင် ပုံမှန် လိမ်းပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ခြေထောက်အရေ ပြားက သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားအရေ ပြားတွေထက်ပိုပြီး ခြောက်သွေ့တတ်ပါ တယ်။ ရေဓာတ်ပုံမှန်အားဖြည့်ပေးတာ ကြောင့် ခြေသည်းခွံတွေပါ ပျက်စီးမှုကင်း စေပါလိမ့်မယ်။
ခြေထောက်နဲ့ ခြေချောင်းလေးတွေ ကြားမှာ ရေစိုနေတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ အ မြဲတမ်းခြောက်သွေ့နေပါစေ။ ရေစိုနေ သေးတဲ့ခြေအိတ်တွေကို မဝတ်ပါနဲ့။ ခြေ စွပ်တွေကို နေ့စဉ်လျှော်ဖွပ်ပြီးမှ ပြန်သုံး ပါ။ ခြေအိတ်နဲ့ ဖိနပ်မစီးခင်အချိန်မှာ သင့်ခြေထောက်တွေ စိုစွတ်မနေစေဖို့ ဂရု စိုက်ပါ။
ခြေဖနောင့် နေရာမှာ အသားမာ တက်တာမျိုး၊ ကွဲအက် တာမျိုး၊ ဖိနပ်ကျပ် ကျပ်တွေကြောင့်ထိခိုက်မိတာမျိုးမဖြစ်စေ ဖို့လိုပါတယ်။ ခြေထောက်ရဲ့ဖိအားဟာ ခြေဖနောင့်ပေါ်မှာ အများဆုံးသက် ရောက်မှုရှိတာကြောင့် ခြေဖနောင့်ထိ ခိုက်မှုဖြစ်မယ် ဆိုရင် သင့်ခြေလှမ်း တိုင်းကို လည်း အလှပျက်စေနိုင် ပါတယ်။
နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေအလွဲသုံးသူများ၏နိုင်ငံခြား ဘဏ်စာရင်းများလော၊ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော မြန်မာအကောင့်ငါးခုကို အစိုးရအနေဖြင့်ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုလာ
မြန်မာနိုင်ငံမှနိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင်ဘဏ်စာရင်း ငါးခုဖွင့်ကာ အပ်နှံထားသည့်ပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိနေပြီးအဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအား ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကအကြွေးလျှော်ပေးမည့်အခွင့်အရေး လက်လွှတ်ခဲ့ရကာ နစ်နာရမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနှင့်ဘဏ်စာရင်း ငါးခုအတွက်ဖော်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်လာသည်ဟုစီးပွားရေးပညာရှင်များက ဆိုသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိသော ဘဏ်အကောင့်ငါးခုကိုနိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှအပ်နှံထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က အကြွေးလျှော်မပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာ့ဘဏ် အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာကစက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်တွင် တင်ရှိနေသည့်အကြွေးမှာ ကြွေးမြီစုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၈၉၀ ကျော် တင်ရှိနေကြောင်း၊တစ်ဘီလျံပင်မရှိသည့် ယင်းပမာဏသည်နဂိုချေးထားသည့်ငွေကြောင့် မဟုတ်ဘဲ အကြွေးဟောင်းမှအတိုးများ တက်လာခြင်းကြောင့်စုစုပေါင်း အကြွေးမှာ တစ်ဘီလျံနီးပါးအထိရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော်မြန်မာနိုင်ငံမှပြည်ပတွင်ဘဏ်စာရင်း ငါးခုတည်းဖြင့် အပ်ထားသည့်ငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိရှိနေခဲ့ကြောင်း ကိုကမ္ဘာ့ဘဏ်မှအာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Mr.Jelson Garcia က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းကဆက်လက်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ် အနေဖြင့် နိုင်ငံတစ်ခုခုမှကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင်ယခင်အစိုးရ လက်ထက်များက တင်ရှိသည့်အကြွေးများ လျှော်ပေးရန်တောင်းဆိုပါက လျှော်ပေးလေ့ရှိ သော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အခြားကမ္ဘာ့နိုင် ငံများကဲ့သို့ အခွင့်အရေး မပေးရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ ပြည်ပတွင်ဘဏ်စာရင်းငါးခုဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ အပ်နှံထားသည့်အကြောင်းများကြောင့် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
"မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကိုအစိုးရသစ်နိုင်ငံအသစ် ဖြစ်သွားလို့အရင်အကြွေးဟောင်းကို ထားလိုက်တော့လို့လုပ်လို့မရဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေ ဆိုရင်ကမ္ဘာ့ဘဏ်က လျှော်ပေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာလို့လျှော်မပေးလဲဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်စာရင်းဇယားတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံက အပြင်မှာ ကိုင်ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့် ငါးခုရှိတယ်။ ဘယ်သူအကောင့်တွေလဲဆိုတာ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က သိတယ်။ အဲဒီအကောင့်ငါးခုမှာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေတယ်။ အကြွေးအားလုံးပေါင်းမှ တစ်ဘီလျံတောင် မရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မြန်မာနိုင်ငံကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်။ အကြွေးတွေလည်းလျှော်မပေးခဲ့ဘူး" ဟုလည်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊အာရှဒေသဆိုင်ရာ ဒါရိုက်တာ Mr. Jelson Garcia က ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအားကြွေးမြီနှင့်ပတ်သက်၍ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းသုံးခုပေးခဲ့ကြောင်း၊မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းငါးခုကိုလုံးဝမထိသည့် နည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြောင်း၊မြန်မာပြည်သူများ အနေဖြင့်အဆိုပါဘဏ်စာရင်းငါးခုနှင့်ပတ်သက်၍ မသိကြသေးကြောင်း၎င်းကထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။
Mr.Jelson Garcia က "အဲဒီအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကိ Option သုံးခု ထုတ်တယ်။ ၁၁ ဘီလျံရှိတဲ့ ဘဏ်အကောင့်ငါးခုထဲကထုတ်ပြီးဒီအကြွေးတွေ ပြန်ဆပ်မလား။ ဒါမှမဟုတ်ကြားကနေပြီး အကြွေးဟောင်းကိုဆပ်ပြီးအကြွေးသစ်ကို လုပ်ပေးတဲ့သူကိုရှာမလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာက အလှူရှင်တွေပေါင်းပြီးTrust Bank လိုမျိုးကမ္ဘာ့ဘဏ်ကိုရန်ပုံငွေလိုများ လုပ်မလားဆိုပြီးထုတ်တယ်။ အဲဒီမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုတိယအချက်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ အကောင့်ငါးခုကို သွားမထိဘူး။ အဲဒီအကောင့်ငါးခုကို ခုထိမြန်မာပြည်သူတွေ မသိသေးဘူး" ဟု Mr.Jelson Garcia က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အကြွေးဟောင်းဆပ်ပြီးအကြွေးသစ် လုပ်ပေးနိုင်သူ ရှာခဲ့ရာ ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့မြန်မာနိုင်ငံမှတင်ရှိနေသည့် ကြွေးမြီများကိုဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း၊မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးဆပ်ရမည့်အကြွေးများကို ဂျပန်နိုင်ငံက ဖြေရှင်းပေးသည့်အတွက်ကမ္ဘာ့ဘဏ်သို့ ပေးဆပ်ရမည့်အကြွေးကျေသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါအကြွေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၈၉၀ ကျော်အားဂျပန်နိုင်ငံသို့ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံဆိုသည့်ပမာဏမှာ မြန်မာ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့များပြည်ပသို့လေးနှစ်နီးပါး ရောင်းချမှုမှရရှိသည့်ငွေစုစုပေါင်းနှင့် ညီမျှသော ပမာဏဖြစ်ရာ များပြားလွန်းနေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နံပါတ် (၁) ၀င်ငွေအကောင်းဆုံးပို့ကုန် သဘာဝဓာတ်ငွေ့အား၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ လေးနှစ်တိတိ တင်ပို့ရာတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလျံကျော်သာ ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်နိုင်ငံတကာမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချေးယူထားပြီး၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ ပြည်ပသို့ ပြန်ဆပ်ရန်ကျန်သည့် အကြွေးစုစုပေါင်း ပမာဏသည်ပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံကျော်သာ ရှိသည်။
နိုင်ငံတွင်အကြွေး၁၁ ဘီလျံရှိနေချိန်နိုင်ငံတော် အစိုးရသည်ပင်အကြွေးဆပ်ရန်မထိရဲခဲ့သော ဘဏ်စာရင်းငါးခုထဲတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံအထိ ရှိနေပြီးအဆိုပါဘဏ်စာရင်း ငါးခုကြောင့်လည်းနိုင်ငံတော်အနေဖြင့် အကြွေးလျှော်ခွင့်ရမည့် အခွင့်အရေးမှာ လက်လွှတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။
၎င်းအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်ပြည်ပနိုင်ငံများထံမှ ဥပမာ-တရုတ်နိုင်ငံမှအတိုးနှုန်း၎ ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးရမည့်ချေးငွေများကိုမ ရယူသုံးစွဲနေရချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံကိုအတိုးနှုန်းနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အောက်သာ ပြန်ရမည့်နိုင်ငံခြားဘဏ်များတွင်သွားရောက်အပ်နှံ ထားသည့် နိုင်ငံမှာ နစ်နာရပြန်သည်။
အတိုးများများဖြင့်ယူသုံးပြီးအတိုးနည်းနည်းသာ ပြန်ရမည့်ဘဏ်များတွင်ယခုကဲ့သို့ သွားရောက်အပ်နှံထားခြင်းမှာ မည်သည့်ငွေများအား မည်သူက မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် အပ်နှံထားသည်ဆိုခြင်းကိုအစိုးရအနေဖြင့် ရှင်းလင်းသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဘဏ်စာရင်းများမှာ အစိုးရ ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ဘဏ်စာရင်းသို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကပိုင်ဆိုင်သည့် ဘဏ်စာရင်းဟုတ်မဟုတ်ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်လာသည်။
နိုင်ငံတော်၏ သစ်၊ကျောက်မျက်၊တွင်းထွက်၊ သတ္တု၊သဘာဝဓာတ်ငွေ့အပါအ၀င် နိုင်ငံ့သယံဇာတများရောင်းချထားရာတွင် ရသည့်ငွေများ ပါမပါ၊နိုင်ငံခြားမှ နိုင်ငံအတွက် ချေးယူထားသောငွေများပါမပါ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူများမှ ရသည့်ငွေများပါမပါ စိစစ်သင့်ပြီ ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်သယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ဖော်ထုတ်အသုံးချရန်အတွက် လာရောက်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထားသည့်ဥပမာအားဖြင့်လက်ရှိအချိန်အထိ ယွမ်ငွေခုနစ်ဘီလျံအထိမြှုပ်နှံထားသည်ဆိုသော မြစ်ဆုံစီမံကိန်းအပါအ၀င်စီမံကိန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ပတ်သက်ခဲ့သည့်ငွေများအဆိုပါ ဘဏ်စာရင်းများထဲ၌ပါနေခြင်းရှိမရှိမှာလည်း စိစစ်ရှင်းလင်းရမည့်အချက်များထဲတွင် ပါဝင်သည်ဟု စီးပွားရေးပညာရှင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံနစ်နာသည့်အတွက်အဆိုပါ ဘဏ်စာရင်း ငါးခုအားနိုင်ငံတော် အစိုးရ အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ရှင်းလင်းရန်လိုအပ်လာကြောင်းနှင့်အဖွဲ့ဖွဲ့စစ်ဆေး ရန်လိုအပ်လာကြောင်း၊အရေးယူသင့်လျှင်ပင် အရေးယူရမည်ဖြစ်သည်ဟု ဥပဒေနှင့်စီးပွားရေး ပညာရှင်တစ်ဦးကထောက်ပြခဲ့သည်။
ဥပဒေနှင့် စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ဦးက "ဒါက အရင်အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် လည်းဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရင် စစ်ဆေးအရေးယူခွင ရှိတယ်။ ဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ခဲ့သလား၊ မလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတာကို အစိုးရအနေနဲ့ အဖွဲ့ဖွဲ့စစ်ပြီးအများပြည်သူကိုချပြသင့်ပြီ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ဆိုရင်လည်း အရင်အစိုးရ လက်ထက်ကလုပ်ခဲ့ပေမယ့် ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးဆိုရင်စစ်ဆေးအရေးယူခွင့်ရှိတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက ငွေအမြောက်အမြားကို အတိုးနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲ ရမယ့် နိုင်ငံခြားဘဏ်တွေမှာ အပ်ပြီးကိုယ်ကအတိုးနှုန်း၎ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပေးရမယ့်ချေးငွေကို ပြည်ပဘဏ်တွေက ပြန်ချေးပြီးသုံးနေတာက Foreign Exchange Regulation Act နဲ့လည်း ငြိနိုင်သလို Money Laundary နဲ့လည်းငြိနိုင်တယ်။ ဘယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ ဥပဒေနဲ့မညီရင် ပြန်ဖော်ထုတ်အရေးယူလို့ရတယ် ဆိုတဲ့အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့လည်းကိုက်ညီလို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဒါကိုရှင်းလင်းပြီးအများပြည်သူကို ချပြသင့်တယ်" ဟုထောက်ပြခဲ့သည်။
စီးပွားရေးပညာရှင် တစ်ဦးကလည်း "ဒီလောက်များပြားတဲ့ ငွေပမာဏ သွားအပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေက ဘယ်ကငွေတွေလဲ။ နိုင်ငံရဲ့ သယံဇာတ ရောင်းထားတဲ့ ငွေတွေပါလား။ စီမံကိန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လာဘ်လာဘတွေပါနေသလား ဆိုတာပါစစ်သင့်တယ်။ အရင်လက်ထက်က လုပ်ထားလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ ညီပါ့မလားဆိုရင် ညီတယ်။ လာဘ်လာဘငွေတွေ ပါနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူက လာဘ်စားခိုင်းလို့လဲ၊ အဲဒီအတွက်ပြန်စစ်ပြီးအရေးယူလို့ရတယ်။ နိုင်ငံက ဘဏ္ဍာငွေ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ဒီလိုအပ်နိုင်တာမျိုးကနိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေ အလွဲသုံးစား လုပ်ထားတာ ဟုတ်၊ မဟုတ်ကိုပါစစ်သင့်ပါတယ်" ဟုလည်းပြောကြားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်အတိုးနှုန်းမြင့်မားစွာ ပေးရလေ့ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံမှ၂၀၀၆ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်းအထိပင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း၃၀၀၀ ကျော်နှင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်း၂၀၀၀ ကျော်ပမာဏအထိ ချေးယူသုံးစွဲထားရကြောင်း၊ ယင်းအပြင် ယခု ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်လည်းအတိုးနှုန်း၎ ဒသမ၅ ရာခိုင်နှုန်းပေးရမည့်ချေးငွေအပါအ၀င် ချေးငွေစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၂၀ ကျော်အထိ ထပ်မံချေးယူရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ အထိလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆပ်ရန်ကျန်သည့်ချေးငွေများထဲတွင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းသို့ပင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၁၃၁ ဒသမ ၇၄၄ သန်းအထိပြန်ဆပ်ရန် ကျန်နေသေးသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့်အတိုးနှုန်းမြင့်မားစွာဖြင် ယူထားသော ချေးငွေများအပါအ၀င် ပြည်ပချေးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလျံကျော်အထိရှိနေချိန်၊ ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးနှင့်လူမှုဘ၀ အကျပ်အတည်းများကိုအစိုးရသစ်ကာလအတွင်း ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းမပေးနိုင်သေးသည့်အချိန်တွင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လေးနှစ်ခန့်ရောင်းမှရမည့် ငွေပမာဏ၊နိုင်ငံတကာ အကြွေးအားလုံးကိ တစ်ချက်တည်းဖြင့်အကြေဆပ်နိုင်သည် ငွေပမာဏများကို နိုင်ငံခြားတွင်အပ်နှံထားနိုင်သည် ဆိုခြင်းမှာ နိုင်ငံတကာအပြင်အများပြည်သူ အနေဖြင့်လည်းမေးခွန်းထုတ်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ပြီး အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ရှင်းလင်းဖော်ထုတ် ချပြရမည့် ကိစ္စရပ်ကြီးတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်မတိုင်မီချေးယူခဲ့သည့် ချေးငွေများအတွက်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန ကျန်ရှိသည့်ပြည်ပချေးငွေများ (အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း)
အေဒီဘီချေးငွေ ၃၅၆ဒသမ ၉၃၅ အိုင်ဒီအေချေးငွေ၈၀၀ဒသမ ၅၉၀ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၅၃ ဒသမ ၀၃၉ ဂျာမနီနိုင်ငံမှချေးငွေ ၅၈၄ဒသမ ၇၂၈ ဂျပန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၆၃၈၈ ဒသမ ၃၂၀ ကနေဒါနိုင်ငံမှချေးငွေ ၈ဒသမ ၀၅၆ ဖင်လန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၄ဒသမ ၈၁၂ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၈၄ ဒသမ ၀၀၆ အီတလီနိုင်ငံမှချေးငွေ ၆ဒသမ ၀၉၀ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၉ဒသမ ၇၅၆ နော်ဝေနိုင်ငံမှချေးငွေ ၃၇ ဒသမ ၁၂၆ သြစတြီးယားနိုင်ငံမှချေးငွေ ၃၇ ဒသမ ၀၂၇ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၃၆ ဒသမ ၅၅၂ စုစုပေါင်း ၈၄၀၈ ဒသမ ၃၄၈
ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တင်ပို့မှု ပမာဏ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊သန်း)
ဘဏ္ဍာနှစ် ပမာဏ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ ၂၀၃၉ .၁၃ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ၂၅၂၀ .၇၄ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ၂၃၈၄ .၆၉ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ၂၉၂၆ .၆၉ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ၂၅၂၂ .၅၃ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ၃၅၀၂ .၅၂ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ၃၇၀၀ နှင့်အထက်
၁၉၈၈ ခုနှစ်နောင်ပိုင်းချေးယူခဲ့သည့် ချေးငွေများအတွက်ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန ကျန်ရှိသည့်ပြည်ပချေးငွေများ (အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်း)
အိုပက်ချေးငွေ ၂၂ ဒသမ ၆၄၈ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှချေးငွေ ၁၁၀ဒသမ ၃၈၉ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှချေးငွေ ၅၀ ဒသမ ၂၇၇ ဂျပန်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၆၈ ဒသမ ၅၃၆ ထိုင်းနိုင်ငံမှချေးငွေ ၆၃ ဒသမ ၄၂၀ မလေးရှားနိုင်ငံမှချေးငွေ ၁၅၀ဒသမ ၀၀၀ ဆာဗီးယားနိုင်ငံမှချေးငွေ ၁၇ ဒသမ ၉၃၆ တရုတ်နိုင်ငံမှချေးငွေ ၂၁၃၁ ဒသမ ၇၄၄ စုစုပေါင်း ၂၆၁၄ ဒသမ ၉၅၀
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စင်ကာပူရောက်မြန်မာများ တွေ့ဆုံပွဲ ဝင်ကြေးဒေါ်လာ ၃၀ သတ်မှတ်
စင်ကာပူ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ၂၀၁၃ သို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားရန် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ သွားရောက်မည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ တွေ့ဆုံပွဲအတွက် ဝင်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ကို စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀ သတ်မှတ်ကြောင်း မြန်မာကလပ် (စင်ကာပူ) က စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စင်ကာပူရောက် မြန်မာများ တွေ့ဆုံပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် Resorts World Sentosa ခန်းမ၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး တွေ့ဆုံပွဲသို့ လူငါးထောင်ခန့် တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းမှာ ကုန်ကျစရိတ်ကာမိရုံ မျှသာ ဖြစ်ပြီး အများသဘောတူ သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာကလပ် (စင်ကာပူ)က ထုတ်ပြန်သည်။
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်များကို စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စတင်ရောင်းချနိုင်ရန် စီစဉ်နေပြီး လူတစ်ဦးလျှင် လက်မှတ်တစ်စောင်သာ ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာကလပ်၏ ထုတ်ပြန်သည့်ကြေညာချက် တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။
"လုံခြုံရေးအတွက် ဆိုပေမယ့် အထောက်အထား ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြတဲ့သူကို အနည်းဆုံး နှစ်စောင်တော့ ရောင်းသင့်တယ်" ဟု စင်ကာပူ အိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာအမျိုးသား တစ်ဦးကဆိုသည်။
Singapore Summit 2013 ကို စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့မှ ၂၂ ရက်နေ့ အထိ သုံးရက်ကြာကျင်းပမည် ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြင် သမိုင်းသုတေသီ စာရေးဆရာ ဒေါက်တာသန့်မြင့်ဦးပါ တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည် ဖြစ်သည်။